SKU: 317318-70-0 Isigaba: Uchungechunge lweSarm
I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) Incazelo
I-Raw Endurobol powder iyinhlangano ye-PPARδ receptor. Ivuselela izindlela ezifanayo ezisebenzayo ngokusebenzisa ukuvivinya umzimba, kufaka phakathi i-PPARδ ne-AMP-activated protein kinase. Kuye kwaphenywa njengendlela yokwelashwa okungase kube khona ukukhuluphala, isifo sikashukela, i-dyslipidemia nesifo senhliziyo. I-Raw Endurobol powder ine-synergistic effect uma ihlangene ne-AICAR: inhlanganisela iboniswe ngokukhulisa kakhulu ukuvivinya umzimba ekufundeni kwesilwane ngaphezu kwe-compound yedwa.
I-Raw Endurobol powder ingasetshenziswa abagijimi njengendlela yokwenza ngcono izidakamizwa ezisebenzayo ezingazange zilawulwe yiziqondiso noma zitholwe ngokuhlolwa okujwayelekile. Omunye wabacwaningi abakhulu abavela kulolu cwaningo ngokukhuthazela okukhuthazayo ngenxa yalokho wenza ukuhlolwa komchamo ukuze kutholakale isidakamizwa, futhi wenza ukuba itholakale eKomidini Yamazwe Omhlaba Olimpiki.
I-Raw Endurobol powder (317318-70-0) Siziqu
Igama Product I-Raw Endurobol powder
Brand NAme I-Raw Endurobol powder
I-Drug Class Ama-inhibitors; abaPhakathi kanye namaKhemikhali amahle; Amakhemikhali; Izakhi zeSulfure & Selenium; kl; I-inhibitor; i-Antineoplastic; ama-SARM (i-selective androgen receptor modulator); amaSarms
CAS Inombolo 317318-70-0
I-molecular Fi-ormula C21H18F3NO3S2
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-453.494 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-453.068 g / mol
I-Melting Point I-134-136 ° C
BilisaIng Pi-oint 584.543ºc ku-760mmhg
I-Half Half-Life 16-24 amahora
I-Raw Endurobol powder Aukuphikisana I-agarist ye-PPARβ ekhethiwe futhi enamandla; Isidakamizwa sokuhlola sasho ukulawula i-lipids futhi ukwandise izinga le-HDL, noma i-cholesterol enhle, egazini. Isakhi se-cell-permeable, thiazolyl esisebenza njengento enamandla, ehlangene kakhulu, i-PPARδ agonist.
Umswakama Omude Wase-Endurobol (317318-70-0)
Ukuze uqonde ukuthi i-endurobol iyini, udinga ukuqonda ukuthi akuyini. Ngenkathi abantu abaningi bephuza i-endurobol ekilasini lama-SARM, lesi sakhi samakhemikhali asiyona i-SARM kodwa kunama-agarist (PPARδ (delta) receptor agonist.
Kubalulekile ukuhlukanisa leli qiniso ngoba ithonya elikhulu le-endurobol emzimbeni liphikisana namaSARM amaningi. Ithonya le-Endurobol livame ukuba nesibindi ngoba livuselela i-oxidation ye-fat ngenkathi ama-SARM amaningi asetshenziselwa izinjongo ze-anabolic kuphela, njengokwakhiwa kwemisipha namandla.
Njengoba sizoxoxa kancane kancane, lokhu kwenza i-endurobol ibe yinto enhle kulabo abafuna ukunciphisa amafutha omzimba kanye nokuthuthukisa ezinye izinzuzo ezihlobene nokuxubile.
Ngaphansi kwelebuli yikhemikhali yayo ye-GW-501516, i-endurobol yaqala ngokuyinhloko ukuphatha i-dyslipidemia; noma inani elingavamile lamafutha ne-cholesterol egazini. Kodwa lapho kuqale ukuhlolwa, kwabonakala ukuthi i-endurobol ingase ibe nezinye izinzuzo zokwelapha.
Ngaphandle kokuthuthukisa ngempumelelo amaphrofayili e-lipid, kwaqaphela ukuthi i-endurobol njenge-agarist ye-PPAR ye-receptor i-agonist yayiyoba i-agent enamandla yokwelapha ukukhuluphala, ukwandisa umzimba kanye nokuvimbela noma ukwelapha isifo somzimba njengokusho kohlobo lwesifo sikashukela.
Kodwa njengoba uzokufunda maduzane, lesi chemikhali esiyisimangaliso esingekho ngaphandle kweziphambeko zayo, ezinye zazo ziphawulekayo.
Izindlela ze-Endurobol zifana kakhulu nezama-SARM. Empeleni kungenye yezinhlanganisela ezithakazelisayo kakhulu engizibonele ngabanye. Lezi zimakhemikhali zivumela umzimba ukuba usize ukulawula umuthi we-fat metabolism okuyisimangaliso kakhulu.
Njengoba kukhonjisiwe ngaphambili, i-Endurobol iyi-PPARδ receptor agonist futhi akufanele idideke ne-SARM. Ngokuyinhloko, lokho okukwenza ukuthi ivuselela amaprotheni PPAR-delta emaseli omzimba. I-PPAR-delta iyinzwa ye-fatty acids, etholakala emisipha. Uma i-delta ye-PPAR ishintshiwe, ikhono lakho lokushisa amafutha landa.
Lokhu kwaphinde kwaxhaswa yisifundo esenziwe kumagundane. Amagundane anikezwa i-Endurobol futhi ukukhuthazela kwabo kwande kakhulu.
I-Endurobol iyinhlanganisela ethembisayo kakhulu enamathemba amasha okuvutha amafutha. Ikwazi ukuthuthukisa ukusebenza kwakho njengoba kungekho omunye umuthi owenzayo. Ukuthi le miphumela emihle isekelwe yizifundo kwenza kube ngcono nakakhulu.
Izinzuzo we-Raw Endurobol powder (317318-70-0)
◆ Into yokuqala ongayilindela kusuka ku-Endurobol yenziwa ngcono ukusebenza komzimba. Ucwaningo lubonisa ukuthi i-Endurobol yanda kakhulu ibanga eligijima lezinyunyana ekuhlolweni kokubekezelela ukubekezela. Ukuqina kwakho kuyanda njengoba kungakaze kwenzeke ngaphambili, uzofuna ukuqhubeka uzixosha. Ngenxa yokuthi ngcono kakhulu ukuqina nokukhuthazela kuye kwavinjelwa i-WADA kuyo yonke imidlalo yezemidlalo. Lokhu kufanele kukunikeze umbono wendlela GW501516 enamandla ngayo ngempela.
◆ Into elandelayo elandelayo nge-Endurobol ukuthi iyashisa ngokushesha amafutha. I-Yep, kuqinisile - ngaphandle kokuqina okuthuthukisiwe, uzophinde ushise amafutha ngokushesha. Kuzokusiza futhi ukubambelele emisipha yakho ngenkathi ukhona ekulahlekeni kwekhalori. Abanye abantu baze babambelele i-GW-501516 ne-SR-9009 ukudala umshini wokushisa wamafutha. Ngithembele, i-GW501516 iWIN inamandla kunazo zonke ezinye izinto ozizame.
◆ I-Endurobol ingaba nethonya elihle enhliziyweni nasemithanjeni yegazi. Ucwaningo olwenziwe kumagundane lwabonisa ukuthi umthamo omncane we-Endurobol unciphisa umonakalo owenzelwe izicubu emithambo yegazi. Khumbula ukuthi lolu cwaningo lwenziwe kumagundane, ngakho-ke aluqinisekiseki ukuthi lokhu kusebenza kubantu.
◆ Kufanelekile ukuphawula ukuthi lesi sakhi sinamandla okugqugquzela ukukhula kwemisipha. Ngokusebenzisa i-PPAR-Delta hhayi amafutha kuphela atholakala, kodwa ama-muscle fibers nawo athola amandla.
◆ Akukho ukususwa kwesimiso se-hormone yemvelo. Ngokungafani ne-Testolone, i-Endurobol ngeke ibe nethonya emazingeni akho e-testosterone, okusho ukuthi akudingi i-PCT. ◆ I-Endurobol ingadlala indima ebalulekile ekuphulukisweni okulimazayo.
I-Raw Endurobol powder enconyiwe (i-317318-70-0) Isilinganiso
Izilinganiso zaziphakathi kwe-2.5 kuya ku-10mg ngosuku ngosuku lwesifundo somtholampilo.
Uzobona abasebenzisi abafika ku-30mg we-Endurobol powder ngosuku. Ngokuvamile, abantu abenza kanjalo banolwazi oluningi futhi baye bagijima izikhathi eziningi esikhathini esidlule. Ngizozama ngempela ukuhlala kude nemilinganiselo ephakeme yama-powder ngoba kukhona ulwazi oluncane olutholakalayo.
I-Endurobol ine-half-life yamahora angu-12-24. Lokhu kusho ukuthi kuzodingeka ukwenze kabili ngosuku. Iningi labantu lilapha kanye ekuseni futhi kusihlwa, lokhu kuzogcina amazinga emzimbeni ozinzile.
Ubude bomjikelezo akumele bube ngaphezu kwamaviki angu-6-8. Futhi, cishe uzobona abanye abasebenzisi bayithatha isikhathi esingaphezu kwamaviki angu-8 kodwa lokho kuyingozi kakhulu. Ngizohlala ngiphakamisa ukuthi ngiyidlale ephephile futhi ngigcine umthamo uphansi futhi ubude bomjikelezo bufushane.
I-Endurobol ayidingi i-PCT, ungakwazi ukumane uyenqabe ngemva kokuba umjikelezo usuqedile.
Abanye abantu bazophinde baqobe le nhlanganisela ne-Ostarine powder ne-Andarine powder ukuze benze i-Stack SARMs. Ikakhulu ngoba ziphumelela kakhulu ekulondolozeni imisipha.
Okuqhamuka uma udla imishanguzo we-Raw Endurobol powder (317318-70-0)
Naphezu kwalokhu ukuthi izinzuzo ezibonakalayo ze-Endurobol ziyamangalisa kakhulu, akusikho ngaphandle kweziphambeko zayo futhi ngeshwa, zingase zibe nesizathu sokugwema ukusetshenziswa kwezinto eziphelele.
Esinye sezici ezikhangayo ze-SARM kanye nama-agonists we-PPAR abamukelayo ukuthi yiwo angewona ama-androgenic futhi ahlose izicubu ezithile. Lokhu kusho ukuthi imiphumela emibi ivame ukulinganiselwa futhi ayinzima, futhi uma kwenzeka i-Endurobol, lokhu kuyiqiniso ngempela. Ngokuyinhloko, abasebenzisi be-Endurobol ababiki noma yimiphi imiphumela emibi, emibi.
Kodwa-ke, i-Endurobol ihamba nezindaba ezimbili ezikhukhumezayo, eziningi ezisheshayo ukuzishiya: okungenzeka kube nomdlavuza nomonakalo wesibindi.